News - Sidee looga saaraa ciddiyaha?
Sidee looga saaraa ciddiyaha?
Ciddiyaha ciddiyaha ayaa la isku qurxiyo oo loo adeegsado wax ka beddelka iyo kordhinta muuqaalka ciddiyaha. Waxay sameyn kartaa filim khafiif ah dusha cidiyaha. Ciddiyaha ciddiyaha ma sahlana in la nadiifiyo. Ka qaadida ciddiyaha duugga ah ee hore waxay noqon kartaa xoogaa xanuun, gaar ahaan markaad leedahay dhowr lakab oo aad ka xoqdo. Boolida ciddiyaha ayaa aakhirka is xoqaysa, laakiin markay bilawdo inay is xoqdo, waxay kaa caawin doontaa gacmahaaga inay si fiican u eegaan oo ay kor u qaadaan caafimaadka ciddiyaha.
1. Xullo cidiyaha kaarbaxa, tag farmashiyaha ama dukaanka qurxinta si aad ugu iibsato dhalo cidiyaha ka saaraya. Waxay badanaa doortaa ciddiyaha iyo waxyaabaha kale ee ciddiyaha u dhow meelaha la isku qurxiyo. Dhalada waxaa ku jira ka-goynta cidiyaha masaxda ku filan si looga saaro cidiyaha ku filan.
Ciddiyaha xoqidda ciddiyaha ayaa badanaa lagu rakibay dhalo caag ah oo leh lowska, laakiin sidoo kale waxaad ku iibsan kartaa barkadda qubeyska oo leh isbuunyo. Farahaaga ayaad ku quusin kartaa barkadda qubeyska oo aad ka saari kartaa ciddiyaha. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ciribtirka ciddiyaha badanaa waa acetone. Qaar ka mid ah waxyaabaha lagu qurxiyo waxyaabaha la isku qurxiyo waxaa ku jira aloe vera iyo waxyaabo kale oo dabiici ah, kuwaas oo jilcin kara maqaarka inta laga saarayo qurxinta.
2. Dooro mashiinka wax lagu nadiifiyo ciddiyaha. Ciddiyaha xoqidda ciddiyaha ayaa loo baahan yahay in lagu xoqo laguna xoqo ciddiyaha arjiga. Qaar ka mid ah codsadeyaasha ayaa ka fiican kuwa kale waxayna ku habboon yihiin noocyada kala duwan ee manicures. Haddii aad leedahay laba ama laba lakab oo ciddiyaha carada qaro weyn leh, waxaad beddel ahaan u isticmaali kartaa tuwaallo waraaqo ah. Dusha sare ee dusha sare ee tuwaalka ayaa gacan ka geysanaya xoqidda ciddiyaha.
Suufka suufku wuxuu ka caawiyaa ka saarista ciddiyaha geesaha ciddiyaha iyo googoynta.
3. Wargeys ama tuwaal warqad saar miiska ama miiska. Soo bixiyaha cijiyaha cireedkaaga iyo suufka, shukumaan xaashi ama suuf ah. Ka saarida ciddiyaha ciddiyaha ayaa laga yaabaa inay wasakh tahay, sidaa darteed waxaa fiican inaad ku sameysid musqusha ama meelaha kale ee aan lahayn go'yaal iyo dusha sare, kuwaas oo waxyeelo u geysan kara iyadoo lagu buufinayo ciddiyaha.
4. Ku qoo qalabka wax lagu nadiifiyo cidiyaha. Fur daboolka mashiinka wax lagu nadiifiyo ee ciddiyaha, ku dheji qalabka wax lagu furiyo, dhaladana ku shub dhalada. Haddii kale, waxaad ku shubi kartaa qalabka wax lagu nadiifiyo ciddiyaha baaquli oo waxaad ku dhex quusin kartaa suufka ama tuwaalka warqadda xalka.
5. Ku xoq cidiyaha mashiinka wax lagu shubo. Ku masax ciddiyahaaga dhaqdhaqaaq wareeg ah illaa ay ciddiyaha duugga ahi ka dhacaan. Sii soco ilaa aad ka takhalusayso qalabka ciddiyaha .Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad isticmaasho madaxa rusheeyaha cusub dhowrkii dhidib ee musmaarro ah, gaar ahaan haddii lagaa saaray wax ka badan hal ciddiyaha.
Dhaq gacmaha. Ciddiyaha xoqidda ciddiyaha ayaa laga sameeyay maaddooyin adag oo gacmahaaga qallajin doona, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in la maydho ciddiyaha haray ee ku hadhay isticmaalka ka dib.
Waxa kale oo jira talooyin yar yar oo nolosha guud ah oo loo adeegsan karo in lagu sifeeyo cidiyaha cidiyaha.
Waxaad ku dalban kartaa daaha ciddiyaha ciddiyaha rinjiga la rinjiyeeyay, ka dibna ku tirtir suufka ama suufka. Haddii ciddiyaha ciddiyaha madax adag yihiin, ku celi tallaabadan. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa buufinta jirka si aad uga saarto cidiyaha. Buufinta urka waxay ka kooban tahay maaddooyin saabuun leh waxayna leeyihiin awood nadiifin oo xoog leh. Laakiin qaabkani wuxuu dhaawici doonaa ciddiyaha, markaa si taxaddar leh u isticmaal. Intaas waxaa sii dheer, daawada cadayga sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro cadeyga cidiyaha, lagu tirtiro daawada cadayga ee ciddiyaha leh ciddiyaha cidiyaha, ka dibna isticmaal cadayga si aad ugu dhex gasho biyaha oo aad si fudud ugu cadayato.